वैद्य माओवादीमा तीब्र अन्तसंघर्ष | Diyopost - ओझेलको खबर वैद्य माओवादीमा तीब्र अन्तसंघर्ष | Diyopost - ओझेलको खबर
वैद्य माओवादीमा तीब्र अन्तसंघर्ष
दियो पोस्ट आइतबार, चैत्र १४, २०७२ | ८:५८:०१
चैत १४, काठमाडौ । नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी)को जारी बैठकमा एमाओवादीसंग एकता गर्ने विषय नै प्रमुख एजेण्डा भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
उनले भने अहिलको आवश्यकता अनुसार पार्टी एकता गर्ने हो । हिजोको इतिहासमा रुमल्लेर हुदैन । इतिहासबाट गर्व गर्ने हो । त्यहि दोहराउने होइन ।
हिजोको समिक्षा हुनु पर्छ तर हिजोको गल्तीबाट पाठ सिक्नु पर्छ । तीन दिन देखि जारी बैठकमा आफ्ना–आफ्ना भनाइ राख्ने क्रम जारी छ । तर सबै भन्दा बढी बहस प्रचण्डले लेखेर दिएको पत्रमाथि भइरहेको छ । अहिले पनि नेता त प्रचण्ड नै रहेछन् । अर्को पार्टीमा पनि आफ्नो विचारमाथि बहस गराउने क्षमता प्रचण्डमा अहिले पनि रहेछ ।
युवाहरु अहिलेको आवश्यकता एकता हो भन्ने विचारमा छन् भने पुरानाहरु अझै जड रहेको ती सदस्यले बताए । अहिले पुन माओवादलाई पुस्तकालयमा थन्क्याउने कि पुन जनतामा पुगाउने भन्ने बहस क्रान्तिकारी माओवादीमा चलेको उनले बताए । ०५२ सालबाट जनतामा पुगेको मालेमावाद अहिले पुन पुस्तकालयमा पुगाउने प्रयास भइरहेको ती सदस्यले बताए ।
केहि साथिहरु माओको विचार रक्षाको नाममा विचारलाई पुस्तकालयमा थन्काउदै छैन । तर माओले बमवार्ड द हेडक्वार्टर भनेका थिए । उनको यो भनाई संसोधनवादका विरुद्ध थियो । क्रान्तिको पक्षमा थियो । तर यहाँ विचार बचाउने नाममा माओवाद जप्ने काम हुदै छ ।
माओले बमवार्ड द हेडक्वार्टर भन्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको साथ खोजे तर यहाँ भने पुराना पुराना हिजोको नवसंसोधनवादी भनेकाहरुसंग एकता गर्न चाहन्छन् । जब कि जानुपर्ने त अहिले युवाहरुसंग हो , क्रान्तिको लागि मलाई साथ दिनु भन्नु पथ्र्यो ।
अर्का नेताले भने कार्यदिशाको बहस हुनु पर्छ । तर संसार बदल्छु भन्नेले आफु पनि बदलिन जान्नु पर्छ । आफै बदलिननसक्नेले कसरी संसार बदल्छ ? संविधान बनेको छ तर त्यो कुनै वेद होइन, कुरान हैन जो परिवर्तन नहुने ? यो सविधान त बदल्न सकिन्छ । हामी संसार बदल्न हिडेका मान्छेलाई संविधानले एकता गर्न रोक्छ भन्नु गलत हो ।
आइतबार, चैत्र १४, २०७२ | ८:५८:०१